Iindaba - Itanki lokuGcina amafutha kweThutyana leMigodi kunye nezoLimo
Amatanki oGciniweyo oGcina ipetroli ayindlela efanelekileyo yokugcina ulwelo oluninzi kwifama yamafutha okanye kwindawo enkulu yokugcina indawo. Ukuhanjiswa kuqengqiwe kwaye kulula ukuhambisa, iitanki zethu eziguqukayo lukhetho olufanelekileyo lokugcina amafutha okwethutyana ngexesha lokusebenza kwemigodi, ukulungiswa kwemibhobho, ukusebenza komkhosi, nokunye okuninzi.
Iitanki ezinokubhangiswa zeFama yamafutha
Iitanki zokugcina izinto ezingamanzi ezinokuwela zinika izibonelelo ezininzi zeetanki zokugcina ulwelo oluqinileyo. Ezinye zezibonelelo zibandakanya:
Amandla amakhulu: Iitanki zinokwenziwa ngomthamo ukuya kuthi ga kwi-210,000 yeelitha, ukuvumela ukugcinwa kwamandla amakhulu ngexabiso eliphantsi kakhulu.
Ukuhanjiswa ngokukhawuleza kunye nokuSeta: Iitanki eziguquguqukayo zithunyelwa zisongelwe, ukuze ufumane ubuninzi ngexesha elinye kwaye uqalise iprojekthi yakho kwakamsinya. Ukuthunyelwa kwabo ngokukhawuleza kubenze bagqibelela kwiimeko zongxamiseko.
Uluhlu lweMozulu ngokubanzi: Itanki lokugcina amafutha okwethutyana lenziwa ukumelana nemozulu ebanzi.
Iphrofayili ephezulu okanye esezantsi iyafumaneka: Kuxhomekeke kwizicelo zakho, iitanki zenziwe ngeprofayile ephezulu okanye esezantsi ukunceda ukuhlangabezana neemfuno zakho.
Iitanki ezingafakwanga zibekwe kwindawo ekubekwa kuyo ifama njengoko kubonisiwe kuyilo lwesampulu apha ngezantsi. Iitanki zepetroli ezingafunekiyo zibekwe zijikeleze umgca wamafutha odityaniswe kwezi tanki nganye.
Ngolwazi oluthe kratya okanye uyilo lweetanki olwahlukileyo, wamkelekile kwi-imeyile rdflexitank@126.comokanye ufowunele ku-86-13589398394! Sonwabe ngakumbi ukusebenza nawe kwiprojekthi yakho kwaye ufumane uyilo oluya kukusebenzela.